OM, Author at Owl Myanmar News - Page4of 106
အစားမှားရင် တစ်လုပ် သန်းနုတယောက် ထင်းစည်းလေးအသာချရင်း ထန်းပင်ပေါ်က ထန်းရည်ချိုအိုးတွေနဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ ဦးသိန်းရွှေကိုမော့ငေးရင်း….ဦးလေး ရေဆာလာလို့ အမောပြေထန်းရည်တိုက်အုံးနော်..အေး ခဏစောင့်အုံးဟေ့”အသံသြသြနဲ့ ဦးသိန်းရွှေပြန်ပြောတယ်……သန်းနု”တယောက်ညက ဗီတီရိုရုံမှာ ကာလသားတွေစုပြီး အောကားကြည့်နေကြတာကို ဖယောင်းတိုင်ဝယ်ထွက်ရင်း ထရံပေါက်ကချောင်းကြည့်ခဲ့သည် အသားဖြူဖြူအမျိုးသမီးကို ကပ်ပလီကြီးရဲ့ လီးကြီးနဲ့ မညှာမတာလိုးနေတာကို ခဏလေးကြည့်မိခဲ့ခြင်းကစ၍ ညကလည်းအိပ်မပျော်ခဲ့ တခါမှအတွေကြုံမရှိဖူးတဲ့ ၁၇နှစ်ရွယ်လေးမှိ့ သွေးသားဆူလောင်မူတွေ မြင့်တတ်ခဲ့ရတယ် မျက်လုံးထဲမှာ
2D&3D ဒိုင် ကျမ အိမ့်ချို။တောင်ဒဂုံမှာနေတယ်။အသက်၂၈နှစ်၊အပျိုမဟုတ်ဘူးတစ်ခုလပ်။ကလေးတော့မရှိဘူး၊မိသားစုတော့ရှိတယ်။မောင်နှမလေးယောက်ရှိတယ်။အကိုတွေကလူဆိုးတွေမို့အိမ်မလာကြဘူး။အိမ့်ချိုလည်းအကိုတွေကြားနေခဲ့တာပျော့စိပျော့ညံ့တော့မဟုတ်ဘူး။အပျိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုပေမယ့်အထင်မသေးကြနဲ့။ရုပ်အခံရှိတယ်။အသားဖွေးတယ်။လုံးကြီးပေါက်လှဆိုတာကျမလိုပုံမျိုးပဲ။မျက်ခုံးကောင်းနှာတံပေါ်တယ်။နို့ထွားတယ်။တင်ကြီးကကောက်ချိတ်နေတာ။။ရှင်တို့မြင်အောင်ပြောရရင်ဇွန်သဉ္ဇာလိုပုံမျိုးပဲ။ လူအိုတွေလည်းသဘောကျသလိုလူပျိုတွေလည်းသဘောကြတယ်။လမ်းသွားရင်ယောက်ျားလေးတွေအပြောဆုံးကနည်းတဲ့ဖင်ကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖင်ထောင်လိုးခွဲလိုက်ရရင်တော့ရှယ်ပဲတဲ့။တစ်ခုလပ်ပေမယ့်လိုးချင်နေသူတွေတစ်ပုံကြီး၊အင်းလေအိမ့်ချိုလိုလူမျိုးမှသဘောမကျရင်အဲလူကအာသဝေါကုန်ပြီးတဲ့လူပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ယောကျားဆုံးတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။တစ်ခုတော့ရှိတယ်။ကျမကတခုလပ်ဆိုတော့လူတွေကရိသဲ့သဲ့တော့အပြောခံရတယ်။ကျမကလည်းအရင်ကတည်းကဖော်ဖော်ရွေရွေသမားဆိုတော့လူတွေနှင့်အဆင်ပြေတယ်။ကျမအလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းရှာဖွေရတာ့မလုပ်ချင်ဘူးလေ။အဲဒါနှင့်ကျမနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလက်ခွဲရောင်းတယ်။လဘ်ကောင်းတယ်ရှင်။ကံကြမ္မာအကျိုးပေးထူးခြားတယ်။ကျမဆီကအလျော်ဆိုတာအရမ်းနည်းတယ်။ပေါက်ရင်လည်းအကွက်သေးတွေချည်းပဲ။လက်ခွဲဒိုင်ရောင်းရတော့ကျမမှာပြသနာမရှိဘူး၊ဒိုင်ကြီးတွေကရှင်းရတယ်။ကော်မရှင်ခမျိုးမျိုးမြက်မြက်ရတယ်။ရဲတွေနှင့်လည်းရင်းနီးလာတယ်။အဲရဲတွေကငွေပေးရင်ရတယ်။သူတို့ငွေလာယူရင်ကျမကိုအသေအချာကြည့်တယ်။တဏှာမျက်လုံးတွေနှင့်ပေါ့။ကျမစီးပွားရေးလုပ်တာ။ဒီလောက်တော့ခံရမှာပေါ့လေ။ဒီလိုနှင့်တနှစ်လောက်ရောင်းရတော့ငွေတော်တော်လေးစုမိတဲ့အခါကျမလောဘတက်လာတယ်။ဒိုင်လုပ်ချင်တယ်။အဲဒါဆိုပိုမြတ်မယ်လေ။အဲဒိမှာ ကျမ အတွက်အရေးကြီးတာကချဲဒိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရဲနှင့်ပတ်သက်ရမယ်။ကျမတို့မြို့နယ်ကစခန်းမူးအသစ်ရောက်တဲ့အတွက်စနည်းနာရတယ်။ ခုရောက်တဲ့ရဲနာမည်ကကိုရဲနောင်တဲ့။မိန်းမရှိတယ်။ကျောင်းဆရာမမို့ရန်ကုန်မှာမရှိတာပါ။သဘောကောင်းတယ်လို့အသံထွက်တယ်။ရဲသဘောကောင်းတယ်ဆိုတာကျမတို့စေတနာမရှိသလောက်ပါပဲ။အဲဒါနှင့်ရဲတစ်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးစခန်းမူးနှင့်စားသောက်ဆိုင်မှာစကားပြောချင်လို့ဆိုပြီးချိန်းလိုက်တယ်။ကျမလည်းအလှပြင်ပြီးစားသောက်ဆိုင်မှာစောင့်လိုက်တယ်။ကိုရဲနောင်ရောက်လာပြီးတော့ကျမကိုတချက်လမ်းကြည့်ပြီးပြုံးပြတယ်။သူကတော့ယူနီဖောင်းဝတ်မလာပဲရိုးရိူးအဝတ်အစားနှင့်ပါပဲ။ရုပ်ရည်သန့်သန့်ပဲ။ဗိုက်ပုနံကားမဟုတ်ပဲစမတ်ကျတယ်။ “ကြွပါစခန်းမှူးကြီးရှင့်” “ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒါနှင့်စခန်းမူကြီးလို့မခေါ်ပါနှင့်ကိုရဲနောင်လို့ပဲခေါ်ပါဗျာ” “ဟုတ်ကဲ့ရှင့်၊လေးစားမှု့နှင့်ခေါ်တာပါရှင်” “ကဲဗျာဒီကညီမက ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲ” “အေးအေးဆေးဆေးပြောကြတာပေါ့ရှင်” “ဟုတ်ကဲ့ ပါဗျာ” “ကိုရဲနောင်ကြိုက်တာမှာပါ” “သောက်လို့ရလား” “ရတာပေါ့ ကြိုက်တာပြော အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်” ကိုရဲနောင်စားစရာ၊သောက်စရာတွေမှာပြီးတေ ာ့သောက်ကြတာပေါ့။အရက်သောက်လာပြီဆိုရင်လူတွေသဘောကောင်းတတ်ကြသလိုပြောရဲဆိုရဲလည်းရှိလာတယ်။ကိုရဲနောင်က “ကဲညီမပြော ဘာကိစ္စလဲ” “ဒီလို..ကိုရဲနောင်၊ကျမချဲရောင်းချင်တာ” “အခုလည်းရောင်းနေတာပဲမဟုတ်လား” “အခုကလက်ခွဲလေ၊ကျမကိုင်တိုင်လုပ်ချင်တာ”
ဟာ အောင် ကလည်းကွာ ရှက်စရာကြီး
ဟာ အောင် ကလည်းကွာ ရှက်စရာကြီး မေဧကရီ မှာ ယောကျၤား ရှိပေမဲ. သူ.ယောကျၤား ကိုဇော်ထွန်း က နယ်တွင် အလုပ်လုပ်နေတာမို.၂ လတခါ လောက်သာ တွေ.ရပြီး သူ ကတော. ရန်ကုန် မှာပင် စတိုးဆိုင်ဖွင်.ကာဆိုင်မှာပင် အသက်၁၅နှစ်ခန်. အိမ် ဖေါ်မလေး သက်စု နှင်. နေတာဖြစ်သည်၊ သူ.
ရှမ်းမလေးကလျာ သူရလည်း ခရီးလမ်းတစ်လျောက် အချိန်တော်တော်ကြာအောင်တွေးလိုက်တာ နောက်ကနေ ပုခုံးကို လာပုတ်မှ လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ သူရ သူငယ်ချင်းဖြစ်သည်။ ”လာလေကွာ…။ မင်းမလည်း အလွမ်းသယ်နေတာနဲ့ မပြီးတော့ဘူး။ ငါတို့က မင်းကိုစောင့်နေတာ။ ဒီမှာ မိန်းကလေးတွေနဲ့ ဘာမှလုပ်တတ်တာမဟုတ်ဘူး” ”အေးပါကွာ။ လာပါပြီ” သူရ စိတ်ကိုတစ်ချက်တင်းပြီး အလုပ်တွေကို ဆက်ပြီးလုပ်လိုက်သည်။ ကားငှားတာ၊ ကားသမားနဲ့ စာချုပ်ချုပ်တာ၊
သူငယ်ချင်းမို့ပါ ဒီနေ့ ည ညစာအတူစားဖို့ ဖိတ်ထားတာမို့ ဇော်မျိုးအိမ်ကို ကျနော်လာခဲ့ရတယ်။ လာသာလာရတာ။ မျက်နှာတော့ အပူသား။ အဖြစ်က ဒီလိုဗျ။ ဇော်မျိုးမှာ အရမ်းလှတဲ့ သီတာဆိုတဲ့ မိန်းမရှိတယ်။ သီတာက ခေတ်မီမီနဲ့ အားကစားလိုက်စားလို့ ထင်ပါရဲ့။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည်ကလည်း တကယ့်ရှယ်ပဲ။ မြင်သမျှယောကျၤားတိုင်းက လှည့်မကြည့်ဘဲ မနေနိုင်လောက်အောင် လှသလို အရမ်းလည်း ဆက်ဆီ
အရင်းအနှီး ဦးမြတ်ကျော်ထိုင်နေသောနှစ်ယောက်ထိုင်ဆိုဖာကြီးမှာ မီမီကျော်က လာကပ်ထိုင်လိုက်ပြီး“အဖေ–မနက်ဖြန်သမီးမွေးနေ့လေ–ဘာလက်ဆောင်ပေးမှာလဲ” “သမီးက ဘာလိုချင်လို့လဲ” “စိန်နားကပ်လေးလိုချင်တယ်” “စိန်နားကပ်?” “ဟုတ်တယ်အဖေရဲ့–ရုံးမှာ မိုးမိုးခိုင်က ကျောက်စိမ်းနားကပ်လေးဝတ်လာပြီးလာလာကြွားနေတာ–သမီးကမဝယ်နိုင်တော့မျက်နှာငယ်တာပေါ့–ဝယ်ပေးနော်အဖေ နော်–အရမ်းအများကြီးထဲကမဟုတ်ပါဘူး–ငါးသိန်းတန်လောက်ဆိုတော်ပါပြီ–နော်အဖေ့”ပြောရင်းနှင့် ဦးမြတ်ကျော်လက်မောင်းကို သူမလက်ကလေးနှစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်ကာလှုပ်ရမ်းရင်း နို့အုံဖြင့်မသိမသာထိလိုက်သည်။ရုံးသွားရန်ပြင်ဆင်ထားပြီးသော လှပမွှေးကြိုင်နေသည့် မီမီခိုင်က တမင်လာထိမှန်းသိလိုက်သော အသက်လေးဆယ့်ငါးနှစ်အရွယ် သန်မာဆဲဦးမြတ်ကျော်၏လီးက ချက်ချင်းမာချင်လာသည်။မိန်းကလေးကတောင် စ သေးတာ ဘာဖြစ်လဲကွာ ဟူသောအတွေးရိုင်းတို့ဝင်လာသည်။သေချာအောင်စူးစမ်းဖို့တော့လိုသည်။ “အဲ့ဒါဆိုသမီးက ဘာပြန်ကျွေးမှာလဲ” “အဖေစားချင်တာကျွေးမယ်လေ”လက်မောင်းကို
ခိုင်ခိုင်ဖြိုး ကျွန်မကတော့ ခိုင်ခိုင်ဖြိုးပါ။ အသက်ကတော့ 23ဆိုပါတော့။ အမျိုးသားက သဘောင်္သားအရာရှိလေ။ သူကအရာရှိဆိုတော့ ဝင်ငွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ သူက ခြောက်လမှတစ်ကြိမ်လောက်မှ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ပိုက်ဆံရှိတယ်လို့တော့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် တိုက်နဲ့ခြံ။ ကိုယ်ပိုင်ကားက သုံးစီး။ ပြီးတော့ ကျွန်မလည်းတစ်ယောက်ထဲပြင်းတာနဲ့ မြို့မဈေးမှာ ဖုန်းဆိုင်ဖွင့်ထားတာက အခုဆိုရင် လက်လီ၊ လက်ကားတော်တော်လေးကို အရောင်းအဝယ်ကောင်းနေပါပြီ။ ကျွန်မကတော့
လူလစ်ရင်ခိုးခိုးပြီး ကျနော်ဒီစက်ရုံရောက်ပီး ၅ လလောက်အကြာမှာ သူမတို့အတွဲ ရောက်လာပါတယ်..သူမနာမည်က စွန်းတဲ့ မြန်မာလို လိမ္မော်သီးပေါ့.. ထိုင်းတွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မင်္ဂလာမဆောင်ရသေးပဲ အတူ့နေ ပိုက်ဆံအတူစုပီးမှ မင်္ဂလာဆောင်ပီးမှ လင်မယားအရာရောက်တာမို့ ကြားထဲမှာ ပြတ်သွားပီး အသစ်ရှာကြလည်း တော်ရုံ ဂရုမစိုက်ကြပုရယ်… ရောက်ပီးမကြာပါပု တစက်ရုံလုံးရဲ့ တဦးထဲသော မြန်မာလူမျိုး ကျနော်နဲ့ ခင်သွားပီး လက်ဖက်သုတ်ကို
ကျွန်မတို့ရဲ့ခရီး ကျွန်မက ဆိုရှယ်ကျတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပါ။ ဒါကိုလည်း ဖုန်းကွယ်မထားပါဘူး။ မောင်နဲ့ လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာလဲ ယောက်ကျားလေး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး စစနောက်နောက် သွားသွားလာလာပါပဲ။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် ယောက်ကျားလေးတွေနဲ့ ပလူးပလဲနေတတ်တယ်ပေါ့။ အဲလိုနေရတာကို ကျွန်မ ကြိုက်တယ်။ ကျွန်မ အဲဒီလိုနေတတ်တာကို မောင်ကသိပါတယ်။ သူ့အတွက် ဘာမှ ပြဿနာမရှိဘူးဆိုတာလဲ ကျွန်မသိတယ်။ မောင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးနောက် ကျွန်မ အိမ်ထောင်ရေး
ရွှေစွန်ညိုဘာလို့ဝဲ မထွေးလိုလို့ဝဲ မထွေး တစ်ယောက် နိုင်ငံခြားမှပြန်လာပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်အဆက်အပေါက်များပိုမိုထွားလာသည်ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးအောက်မှ လုံးထွားဝိုင်းနေသော တင်လုံးကြီးများမှာလမ်း လျှောက်လိုင်းတိုင်းတုံခါ၍သွားသည် ဖြစ်ညှစ်ချင်စရာ ကောင်းလှ၏ မို့မောက်လှသောရင်နှစ်မြွှာမှာလည်း ဆွဲညှစ်ပြီးစို့ချစ်စရာ။ လေဆိပ်မှအိမ်သို့ ရောက်သောအချိန်မှာ မနက် ၁၀နာရီခန့်ရှိပြီ အိမ်၌ကျွန်တော်တို့မောင်နှှမ ၂ယောက်ပဲနေသည်ဖြစ်ရာမထွေးနိုင်ငံခြားသွားသည့်နေ့မှစ၍အိမ်မှာ ခြောက်ကပ်ခဲ့သည် ယခု မထွေးပြန်ရောက်ပြီးသကာလကျွန်တော့်တို့အိမ်မှာပြန်လည်စိုပြေလာတော့ပါမည်။ မထွေးသည် အိမ်ထဲသို့ဝင်ဝင်ချင်းခရီးဆောင်အိတ်များအားချကာ ရှုပ်ပွနေသော ပစ္စည်းများကိုကြည့်ရင်းအမယ်လေး ငါမောင်တို့များအမနိုင်ငံခြားသွားရင်အိမ်ဖော် ငှားပါဆို မငှားတော့